Exodus 14 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Israelfo no koduu ɛpo no ano (1-4)
Farao tiw Israelfo no (5-14)
Israelfo twaa Ɛpo Kɔkɔɔ no (15-25)
Ɛpo no faa Egyptfo no (26-28)
Israelfo gyee Yehowa dii (29-31)
14 Afei Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: 2 “Ka kyerɛ Israelfo no sɛ wɔnsan wɔn akyi mmɛsoɛ wɔ Pihahirot anim, Migdol ne ɛpo no ntam.+ Na wɔmfa wɔn ani nkyerɛ Baal-Sefon wɔ ɛpo no ho. 3 Na Farao bɛka sɛ, ‘Israelfo no ayera ma wɔn ani so atan wɔn wɔ asaase no so. Wonnya baabiara mfa wɔ sare no so.’ 4 Mɛma kwan ama Farao koma apirim+ na obetiw wɔn, na mede Farao ne n’asraafodɔm bɛhyɛ me ho anuonyam,+ na nea ɛte biara Egyptfo behu sɛ mene Yehowa.”+ Enti wɔyɛɛ saa pɛpɛɛpɛ. 5 Akyiri yi, Egypt hene tee sɛ nkurɔfo no aguan. Ɛhɔ ara na Farao ne ne nkoa sesaa wɔn adwene wɔ Israelfo no ho,+ na wɔkae sɛ: “Dɛn koraa na yɛayɛ yi? Israelfo a yɛama wɔkɔ yi, hena na ɔbɛsom yɛn?” 6 Enti ɔhyehyɛɛ ne nteaseɛnam, na ɔfaa ne dɔm kaa ne ho.+ 7 Ɔfaa nteaseɛnam atitiriw 600, na ɔde Egypt nteaseɛnam a aka nyinaa kaa ho, na ɔpaw akofo a wɔbɛtena emu biara mu. 8 Na Yehowa maa kwan maa Egypt hene Farao pirim ne koma, enti bere a Israelfo no de akokoduru* rekɔ no,+ otiw wɔn. 9 Egyptfo no tiw wɔn,+ na Farao nteaseɛnam, n’apɔnkɔ, ne nkurɔfo a wɔtete apɔnkɔ so, ne n’asraafodɔm nyinaa bɛn wɔn pɛɛ; saa bere no, na Israelfo no asoɛ wɔ ɛpo no ho wɔ Pihahirot a ɛne Baal-Sefon di nhwɛanim no. 10 Bere a Farao bɛn Israelfo no, wɔmaa wɔn ani so hui sɛ Egyptfo no di wɔn akyi. Ɛbaa saa no, Israelfo no bɔɔ hu na wofii ase su frɛɛ Yehowa.+ 11 Na wɔka kyerɛɛ Mose sɛ: “Amusiei biara nni Egypt nti na wode yɛn aba sɛ yemmewuwu wɔ sare so ha yi?+ Adɛn nti koraa na wuyii yɛn fii Egypt baa ha? 12 Yɛanka ankyerɛ wo wɔ Egypt sɛ, ‘Gyae ma yɛnsom Egyptfo no’? Anka eye sɛ yɛbɛsom Egyptfo no mmom sen sɛ yebewuwu wɔ sare so.”+ 13 Ɛnna Mose ka kyerɛɛ nkurɔfo no sɛ: “Munnsuro.+ Munnyina pintinn na monhwɛ sɛnea nnɛ Yehowa begye mo nkwa.+ Na Egyptfo a muhu wɔn nnɛ yi, morenhu wɔn bio da.+ 14 Mo de, monyɛ komm nhwɛ, na Yehowa ankasa bɛko ama mo.”+ 15 Afei Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Adɛn nti na wusu frɛ me? Ka kyerɛ Israelfo no sɛ wɔntoa akwantu no so. 16 Wo de, fa wo poma no kyerɛ ɛpo no so, na emu bɛpae ama Israelfo no anantew asaase kesee so wɔ ɛpo no mfinimfini. 17 Na me de, mɛma kwan ama Egyptfo no apirim wɔn koma na wɔatiw Israelfo no, na mede Farao, n’asraafodɔm, ne nteaseɛnam, ne ne nkurɔfo a wɔtete apɔnkɔ so bɛhyɛ me ho anuonyam.+ 18 Na sɛ mede Farao, ne nteaseɛnam, ne ne nkurɔfo a wɔtete apɔnkɔ so hyɛ me ho anuonyam a, Egyptfo no behu sɛ mene Yehowa.”+ 19 Afei nokware Nyankopɔn no bɔfo+ a na odi Israel asafo no anim no bedii wɔn akyi, na omununkum dum no nso fii wɔn anim bedii wɔn akyi.+ 20 Enti ɛbɛhyɛɛ Egyptfo dɔm ne Israel asafo no mfinimfini.+ Ɔfã baako no, na ɛyɛ omununkum tumm, na ɔfã foforo no nso maa hann anadwo no.+ Enti Egyptfo no anto Israelfo no anadwo no nyinaa. 21 Afei Mose de ne poma no kyerɛɛ ɛpo no so+ na Yehowa maa apuei mframa dennen bɔe anadwo no nyinaa, na epiaa nsu no kɔɔ akyi maa ɛpo no ase dan asaase kesee.+ Na nsu no mu paee abien.+ 22 Enti Israelfo no faa asaase a awo no so wɔ ɛpo no mfinimfini,+ na nsu no yɛɛ ɔfasu wɔ wɔn nifa ne wɔn benkum.+ 23 Egyptfo no, Farao apɔnkɔ, ne nteaseɛnam, ne ne nkurɔfo a wɔtete apɔnkɔ so no nyinaa tiw wɔn koduu ɛpo no mfinimfini.+ 24 Eduu ahemanakye no,* Yehowa fi ogya ne omununkum dum+ no mu hwɛɛ Egyptfo dɔm no na ɔmaa wɔn ani so tan wɔn. 25 Afei otutuu wɔn nteaseɛnam no anan na ɛyɛɛ den maa wɔn sɛ wɔbɛkɔ, na Egyptfo no kae sɛ: “Momma yenguan mfi Israelfo no anim, efisɛ Israelfo nti Yehowa ne Egyptfo reko.”+ 26 Ɛno akyi no, Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Teɛ wo nsa wɔ ɛpo no so na nsu no mmu mfa Egyptfo, wɔn nteaseɛnam, ne wɔn nkurɔfo a wɔtete apɔnkɔ so no so.” 27 Ɛhɔ ara na Mose teɛɛ ne nsa wɔ ɛpo no so, na ade rekye no, nsu no san baa baabi a na ɛwɔ. Afei Egyptfo no yɛe sɛ wɔreguan, nanso Yehowa kaa wɔn guu ɛpo no mfinimfini.+ 28 Enti Farao nteaseɛnam, ne nkurɔfo a wɔtete apɔnkɔ so, ne n’asraafodɔm a wotiw Israelfo kɔɔ ɛpo no mu nyinaa, nsu no bɛkataa wɔn so.+ Wɔn mu baako mpo anka.+ 29 Nanso Israelfo no faa asaase kesee so wɔ ɛpo no mfinimfini,+ na nsu no yɛɛ ɔfasu wɔ wɔn nifa ne wɔn benkum.+ 30 Enti saa da no Yehowa gyee Israelfo fii Egyptfo no nsam,+ na Israelfo hui sɛ Egyptfo no awuwu gu ɛpo no ano. 31 Bere a Israelfo huu tumi* kɛse a Yehowa de ko tiaa Egyptfo no, ɔman no suroo Yehowa, na wogyee Yehowa ne n’akoa Mose dii.+
^ Nt., “nsa a wɔama so.”
^ Kyerɛ sɛ, bɛyɛ anadwo nnɔn 2 kosi anɔpa nnɔn 6.